Inkunkuma yeBiogas kwiSisombululo seMveliso yoManyolo
Nangona ukufuya iinkukhu kuye kwanda ekuthandeni e-Afrika kule minyaka idlulileyo, ibiyinto encinci. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, nangona kunjalo, ibe yinto ebaluleke kakhulu, oosomashishini abancinci abaninzi bejolise kwinzuzo enikezelwayo. Inani leenkukhu elingaphezulu kwama-5 000 ngoku liqhelekile kodwa ukufudukela kwimveliso enkulu kukhulise inkxalabo yoluntu malunga nokulahlwa kwenkunkuma ngokufanelekileyo. Lo mbandela, unomdla, ukwanika amathuba exabiso.
Imveliso enkulu-enkulu izise imiceli mngeni emininzi, ngakumbi leyo inxulumene nokulahlwa kwenkunkuma. Amashishini amancinci awatsali ngqwalaselo ingako kwabasemagunyeni kwindalo esingqongileyo kodwa imisebenzi yeshishini ngemicimbi yokusingqongileyo iyafuneka ukuba ilandele imigangatho efanayo yokhuseleko kwindalo esingqongileyo.
Into enomdla kukuba umceli mngeni wenkunkuma unika amafama ithuba lokusombulula ingxaki enkulu: ukubakho kunye neendleko zamandla. Kwamanye amazwe ase-Afrika, amashishini amaninzi akhalaza ngexabiso eliphezulu lombane kwaye uninzi lwabahlali basezidolophini basebenzisa iijenreyitha kuba umbane awuthembekanga. Ukuguqulwa komgquba wenkunkuma ube ngumbane ngokusetyenziswa kwe-biodigesters kuye kwaba yinto enomtsalane, kwaye amafama amaninzi ajika kuyo.
Ukuguqulwa kwenkunkuma yobulongwe ibe ngumbane kungaphezulu kwebhonasi, kuba umbane uyinto enqabileyo kwamanye amazwe aseAfrika. I-biodigester kulula ukuyilawula, kwaye iindleko zisengqiqweni, ngakumbi xa ujonga izibonelelo zexesha elide
Ukongeza kokuveliswa kwamandla kwe-biogas, nangona kunjalo, inkunkuma ye-biogas, imveliso ephuma kwiprojekthi ye-biodigester, iya kungcolisa indalo ngokuthe ngqo ngenxa yemali yayo enkulu, i-ammonia nitrogen kunye nezinto eziphilayo, kunye neendleko zothutho, unyango kunye nokusetyenziswa phezulu. Iindaba ezimnandi zezenkunkuma ye-biogas evela kwi-biodigester inexabiso elingcono lokurisayikilisha, ke siyisebenzisa njani ngokupheleleyo inkunkuma ye-biogas?
Impendulo isichumiso se-biogas. Inkunkuma ye-Biogas ineefom ezimbini: enye ingamanzi (i-biogas slurry), ebala malunga ne-88% yetotali iyonke. Okwesibini, intsalela eqinileyo (intsalela ye-biogas), ebalwa malunga ne-12% yetotali iyonke. Emva kokuba kukhutshwe inkunkuma ye-biodigester, kufuneka inyanzeliswe kangangexesha elithile (ukuvundiswa kwesibini) ukwenza okuqinileyo kunye nolwelo kwahlulwe ngokwendalo.Isahluli solwelo esiqinileyo Ingasetyenziselwa ukwahlula inkunkuma engamanzi kunye nentsalela eqinileyo yenkunkuma. I-Biogas slurry iqulethe izinto ezinesondlo ezifana ne-nitrogen, i-phosphorus kunye ne-potassium, kunye nezinto ezinje nge-zinc ne-iron. Ngokumisela, i-biogas slurry iqulethe i-nitrogen iyonke 0.062% ~ 0.11%, i-ammonium nitrogen 200 ~ 600 mg / kg, phosphorus 20 ~ 90 mg / kg ekhoyo, potassium ekhoyo 400 ~ 1100 mg / kg. Ngenxa yempembelelo yayo ekhawulezileyo, inqanaba lokusetyenziswa kwezinongo eziphezulu, kwaye linokufakwa ngokukhawuleza zizityalo, luhlobo lwesiphumo sesichumiso esikhawulezayo esineziphumo ezininzi. Isichumiso se-biogas sentsalela, izinto ezinesondlo kunye ne-biogas slurry ziyafana, ziqulathe i-30% ~ 50% yezinto eziphilayo, i-0.8% ~ 1.5% ye-nitrogen, i-0.4% ~ 0.6% ye-phosphorus, i-0.6% ~ i-1.2% ye-potassium, kodwa nayo ityebile kwi-humic iasidi engaphezulu kwe-11%. I-humic acid inokukhuthaza ukwakheka kobume bomhlaba ohlanganisiweyo, ukuphucula ukugcinwa kokuchuma komhlaba kunye nefuthe, ukuphucula iipropathi zomhlaba kunye neekhemikhali, umphumo wokuphucula umhlaba ucacile. Uhlobo lwesichumiso sentsalela ye-biogas iyafana nesichumisi ngokubanzi, esisesichumiso sesiphumo sokugqibela kwaye sinesiphumo sexesha elide.
Itekhnoloji yokuvelisa yokusebenzisa i-biogas oluludaka ukwenza isichumisi esingamanzi
I-slogry ye-biogas ityhilwa kumatshini wokuzalisa iintsholongwane ukuze kuncothulwe amandla kunye nokuvumba, kwaye emva koko i-slogry ye-biogas enegwele yahlulwe ngesixhobo sokuhlukanisa ulwelo oluqinileyo. Ulwelo lokwahlula-hlulwa lufakwa kwizixhobo ezintsonkothileyo zokwenza izinto kunye nezinye izinto zekhemikhali ezichumisayo zongezwa ekuphenduleni okunobunzima. Ulwelo lokuphendula oluntsonkothileyo lutofelwe kulwahlulo nakwinkqubo yemvula ukuze kususwe ukungangcoliseki okunganyibilikiyo. Ulwelo lokwahlula-hlulwa lufakwa kwi-kettle chelating cheating, kunye nezinto ezilandelwayo ezifunwa zizityalo zongezwa ekuphenduleni. Emva kokuba impendulo igqityiwe, i-chelate engamanzi iya kufakwa kwitanki egqityiweyo ukugqibezela ukufaka iibhotile kunye nokupakisha.
Itekhnoloji yokuvelisa yokusebenzisa intsalela ye-biogas ukwenza isichumiso sezinto eziphilayo
Intsalela eyahluliweyo ye-biogas yayixutywe nengca, isichumisi sekhekhe kunye nezinye izinto ezityunyuziweyo kubungakanani obuthile, kwaye umxholo wokufuma walungiswa waya kwi-50% -60%, kwaye umlinganiso weC / N wahlengahlengiswa ukuya ku-25: 1. Ukuvundiswa kwentsholongwane kudityaniswa nezinto ezixubekileyo, emva koko umbandela wenziwe ingqumba yomgquba, ububanzi bemfumba abukho ngaphantsi kweemitha ezi-2, ukuphakama akukho ngaphantsi kweemitha ezi-1, ubude abuphelelanga, kunye netanki Inkqubo yokubilisa i-aerobic ingasetyenziswa. Nika ingqalelo kutshintsho lobumanzi kunye namaqondo obushushu ngexesha lokuvunda ukugcina i-aeration kwimfumba. Kwinqanaba lokuqala lokuvumba, ukufuma akufuneki kube ngaphantsi kwe-40%, ngapha koko akululanga ekukhuleni nasekuveleni kwezinto ezincinci, kwaye ukufuma akufuneki kube phezulu kakhulu, okuya kuchaphazela umoya ongenisa umoya. Xa ubushushu benqwaba benyuka ukuya kuma-70 70, i Umatshini wokujika umquba kufuneka isetyenziselwe ukujika imfumba ide ibole ngokupheleleyo.
Ukulungiswa okunzulu kwesichumiso sendalo
Emva kokuvumba kwezinto kunye nokuvuthwa, unokusebenzisa izixhobo zokwenza isichumiso sezinto eziphilayo Ukulungiswa okunzulu. Kuqala, kwenziwe isichumisi esingumgubo. Inkqubo ye-Inkqubo yemveliso yesichumisi esingumgubo ilula noko. Kuqala, loo nto ityunyuziweyo, emva koko ukungcola kwimathiriyeli kucocwa kusetyenziswa iumatshini wokuhlola, kwaye ekugqibeleni ukupakishwa kunokugqitywa. Kodwa ukuqhubekeka kwiisichumiso segranular, Inkqubo yemveliso yegranular iyinkimbinkimbi, izinto zokuqala zokutyumza, ukucoca ukungcola, izinto zegranulation, emva koko amasuntswana ukomisa, ukupholisa, ukutyabeka, kwaye ekugqibeleni ugqibezele ukupakishwa. Ezi nkqubo zimbini zemveliso zinezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga, inkqubo yemveliso yezichumiso ilula, utyalo-mali lincinci, lilungele umzi-mveliso wezichumiso ezisandul 'ukuvulwa.Inkqubo yemveliso yesichumiso segranular Intsonkothileyo, utyalo-mali luphezulu, kodwa i-granular organic fertilizer ayilula ukuyidibanisa, isicelo silungile, ixabiso lezoqoqosho liphezulu.